Nabata n'oge na-aba uru - agbanyeghị na ọ dị ntakịrị, ọwa ahịa ahịa dijitalụ ọhụrụ na-enye ohere dị egwu ịpụnara ndị na-ege gị ntị ndị asọmpi gị anaghị efe. Ihe egwu dị, n'ezie, bụ na enwere ike imechi onye na-ajụ ase ka ọ daa ma ọ bụ nweta ya. Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịnwere ike imetụta ndị na-ege gị ntị na ịghachite ha na saịtị gị ebe ịnwere ike ijide ozi-e ma ọ bụ tinye ha na mkpọsa na-azụlite, mgbe ahụ ị ga-ahụ ụfọdụ ihe ịga nke ọma.
Nke a bụ ajụjụ nde-dollar na obodo anyị. Ebe ka mmadu si amalite? Nke a bụ otu ndụmọdụ maka gị - Ihe Nlekọta Google.